Norsomnews, Forfatter hos NorSom News - Side 2 av 239
Xildhibaan Maryan: La kulanka Gudoomiye Xaliimo waa ii sharaf.
Norsomnews - 30. april 2022
Golaha Islaamka Norway: Ciidul-fidrigu waa maalintan.
Jaaliyada Norway oo la shirtay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliya.
Norsomnews - 29. april 2022
Booliska oo wiilkan soomaaliga ah ku amaanay geesinimo.
Norsomnews - 26. april 2022
qoxootiga reer Ukraine ee Norway oo cunto yaraan ka cabanaya.
Norsomnews - 25. april 2022
Shir: Gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashada oo Oslo marti ku ah.
Booliska Sweden oo dacwad ka gudbiyay ninkii quraanka kariimka ah gubay.
Norsomnews - 21. april 2022
Ruushka oo tijaabiyey gantaal cusub oo xambaari kara hubka nukliyeerka
Xeryaha Ciidanka Norway oo markii ugu horeysay taariikhda u dabaaldagi doono xafladda ciida.
Booliska Oslo oo diiday in kitaabka quraanka kariimka la gubo.
Norsomnews - 20. april 2022
FHI: Fariin caafimaad oo muhiim ah oo ku socoto dumarka uurka leh.
Norsomnews - 18. april 2022
Norsomnews - 17. april 2022
Gabar dhaqmo ka shaqeyso ayuu tuhun qalad ah u xiray: Isagii ayaa la ganaaxay.
Ruushka: Boris Johnson masoo gali karo dalkeena.
Reer Norway oo mar kale u sharaxan qabashada xilka gudoonka golaha shacabka Soomaaliya.
Daawo: Soomaalida Oslo oo si fiican ugu kacday gurmadka dadkii ku hanti-waayay suuqa Waaheen.
Norsomnews - 15. april 2022
Xabsi dalkiisii kuyaal ayuu ka shaqeyn jiray: 12 sano oo xabsi ayaa lagu xukumay
Norsomnews - 14. april 2022
Wiil loo xukumay inuu sawiro qaawan Snapchat ku faafin jiray.